थाहा खबर: रुकुम घटना : पूर्वगृहमन्त्री शर्मा नै ढाकछोपमा लागेको आरोप
सांसदहरु भने : गृहमन्त्रीको भूमिका पनि चित्त बुझ्दो भएन
काठमाडौं : सांसदहरुले रुकुम चौरजहारीको घटनामा पुर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा नै पीडकको पक्ष लिएर राजनीतिक पहुँचको आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद जनार्दन शर्माले छुवाछुतको घटनामा राजनीतिकरण हुन सक्दैन भन्‍ने अभिव्यक्ति दिएपछि सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
सांसदहरुले रुकुमबाट निर्वाचित शर्माले घटनाका दोषीलाई जोगाउने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएका थिए। सांसद शर्मा बोल्दै गर्दा प्रतिपक्षी दलका सांसद तथा अन्य दलित सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए।
त्यसपछि केही समय सांसद शर्मा र अरु सांसदहरुबीच भनाभन नै चल्यो । सभामुखले सबै सांसदलाई सम्हालिन आग्रह् गरिरहनुभयो । तर केही समय दुवै तर्फबाट भनाभन चलिरह्यो। आरोप प्रत्यारोप चलिरह्यो।
'सभामुखले दिएको समयमा बोल्दै गर्दा आपत्ती गर्नु कुन नियमावलीमा छ सभामुख महोदय? म बोल्न नपाउनु ? मेरो बोल्न पाउने अधिकारको हनन नगरियोस् । म त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुँ', विपक्षी सांसद लगायत दलित सांसदहरुले शर्मालाई बोल्न रोकेपछि आक्रोशित हुदै उनले भने,'त्यहाँको दलितको अधिकारको कुरा पनि मैले राख्न पाउनुपर्छ। बोल्दा बोल्दै आपत्ति गरेको कुरामा मेरो पनि आपत्ति छ।'
सांसद शर्माले छुवाछुतसम्बन्धी घटनाहरुमा राजनीतिकरण हुन नसक्ने भन्दै रुकुम चौरजहारी घटनाको सत्य तथ्य छानबिनका लागि जाजरकोट र रुकुम जिल्ला प्रशासन लागिपरेको बताएका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्रीले दिने जस्तो जवाफ दिएको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए।
सांसद शर्मा पनि बोलेका नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली स्‍नेहीले पुर्व गृहमन्त्री र वहालवाला गृहमन्त्री मिलेर घटनामा संलग्‍नलाई जोगाउने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाए।
यसअघि मंगलबारको बैठकको सुरुमै बोलेका सांसद सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले घटनामा राजनीतिककरण भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरिय संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
सांसद विश्वकर्माले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय परेको भन्दै घटनामा संलग्‍न भनी पक्राउ गरेका मानिसलाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा छोड्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनले मुलुकलकै इतिहासमा त्रासदीपुर्ण र कहालीलाग्दो जातिय दुर्घटना भएको भन्दै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरी वेपत्ताको छानविन गरी मृतकका परिवारलाई राहतको व्यवस्थागर्न माग गरे।
सांसद पार्वती कुमारी विशुन्केले कानुन बनेर व्यवस्था परिर्वतन भएपनि जातिय विभेदको वर्वरताको अन्त्य हुन नसकेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले के गरिरहेको छ भनी गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रेमलाई वैवाहिक सम्बन्धमा रुपान्तरण गर्ने सपना बोकेर प्रेमिका लिन पुगेका जाजरकोटका नवराज विकसहित ३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। अन्य ३ जना अझै बेपत्ता रहेको भन्दै जातका कारणले मारिने क्रम कहिलेसम्म भनी प्रश्न गरे ।
'अन्तरजातीय विवाहका कारण कतिले मारिनुपर्ने सभामुख महोदय?', भनी उनले प्रश्‍न गरे। अन्तरजातीय प्रेम गर्नुको सजाय भनेको मारिनु हो? सभामुख महोदय? ” उनले घटनाको सत्य तथ्य छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरे।
सांसद रेणु कुमारी गुरुङले घटनाको निष्पक्ष छाननविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेकी छन्।